Mgbanwe ime ihe ike na Ecuador gbanwere ka ọ bụrụ Street Party
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Mgbanwe ime ihe ike na Ecuador gbanwere ka ọ bụrụ Street Party
Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị njem nleta na Ecuador natara ozi mberede from embassies ha n'izu gara aga. N'abalị Sọnde, ngagharị iwe a na-eme na Ecuador na-atụgharị ka ọ bụrụ oriri mgbe gọọmentị Ecuador na ndị ụmụ amaala na-emekọrịta ihe. Tupu mgbe ahụ Ecuador Onye isi ala na ndị isi obodo nwere ịnọdụ ala maka mkparịta ụka a na-agbasa na televishọn n'etiti ọgba aghara na-aga n'ihu.
Ihe si na ya pụta bụ njedebe nke Daysbọchị 11 nke ngagharị iwe ike. Ndị ndu gosipụtara na ọ ga-ewepụ iwu onye isi ala nke na-akwụsị enyemaka mmanụ ọkụ ma jiri nke ọhụrụ dochie ya. Onye isi ala Lenín Moreno toro nkwekọrịta ahụ dị ka "azịza maka udo na mba ahụ".
Igwe ọkụ dị ka ndị ọrụ ahụike jikọtara n'ime agba egwu na oriri n'okporo ámá na "ndị ngagharị iwe" nke dịka anyị niile maara ugbu a, bụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Ecuador.
Na mbụ ọnọdụ nchekwa na nchekwa na Ecuador gafere aka, na-akpalite ndị nnọchi anya mba ofesi iji wepụta mmelite iji hụ na nchekwa nwa amaala ha kwa awa.
Pope Francis na-arịọ arịrịọ maka udo n'Ekwedọọ na-esochi otu ụbọchị mwakpo wakporo ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke butere oge mbata.
Francis wepụtara akwụkwọ mkpesa ahụ na Sọnde n'aha ndị bishọp niile nke Amazon, gụnyere nke si Ecuador. Ha nọ na Rome iji kparịta mbọ ndị ụka na-agba iji nyere ndị amaala mpaghara ahụ aka.
Francis kwuru, sị: “Ana m ekerịta iru uju maka ndị nwụrụ anwụ, ndị merụrụ ahụ na ndị furu efu. Ana m agba mbọ ka e nwee udo maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-elebara ndị ọ na-enweghị ka ọ ha ha anya, ndị ogbenye na ndị ruuru mmadụ.